I-Cash Currency Bill Banknote Deposit Machine CDM SJ8608 With Scanner uma kuqhathaniswa nemikhiqizo efanayo emakethe, inezinzuzo ezivelele ezingenakuqhathaniswa ngokusebenza, ikhwalithi, ukubukeka, njll., futhi ijabulela idumela elihle emakethe.atmstar ifingqa amaphutha esikhathi esidlule. imikhiqizo, futhi njalo ngcono kubo. Ukucaciswa koMshini Wediphozithi Yemali Yemali yasebhange CDM SJ8608 With Scanner kungenziwa ngendlela oyifisayo kuye ngokwezidingo zakho.
ibhokisi + lezinkuni
Umkhiqizo uzinzile kumakhemikhali. Alikho ngaphansi kokuguga ngaphansi kwezinga lokushisa eliphezulu noma ukugqwala ku-solvent yemvelo.
◈ Iyahambisana nge imali ukucubungula ezokuzisiza imishini lokho ihlanganisa ukubala imali engamaphepha, umgunyathi, ukuhlunga, futhi isitoreji, kunciphisa i amathuba kwe amaphutha okubala imali, kusheshisa ukucutshungulwa kwemali, futhi kuthuthukisa ukusebenza kahle komsebenzi.
◈ Amadiphozithi anganqamuki: Umnyakazo ungabeka ama-banknotes ngaphandle kokuphazamiseka, ngokushesha, futhi uhlangabezane nezidingo zamadiphozithi amakhulu. Ngomzila omfushane wezokuthutha, ifinyelela izinga lokujama eliphansi kakhulu.
Iyunithi yokulawula:Windows 10 64BIT 4GB RAM, 256 HDD LAN, WIFI(uyazikhethela), COM/USB
Iyunithi Yokucubungula Amanothi:
Ukutholwa Komgunyathi: IR, UV, CIS IMAGE, MT, MG
1. 80mm 203DPI iphrinta yesithombe esishisayo. -Isivinini sokuphrinta: 150mm/s
2. Roll Ububanzi: 150-254 mm
Ikhiphedi ye-Tactile 4*4 alphanumeric PCI ithobelana ne-EPP.
I-UL291 noma i-CEN L ephephile.
Ukuswakama Okuhlobene: 20~80 RH